Cancer – Page5– Healthy Life Journal
သွေးစစ်ဆေးမှုအသစ်က ကင်ဆာရှစ်မျိုးကို စောစီးစွာတွေ့ရှိနိုင်
၊ ကိုထက် ၊ သွေးစစ်ဆေးနည်း အသစ်တစ်ခုက ကင်ဆာရောဂါရှစ်မျိုးကို စောစီးစွာတွေ့ရှိ နိုင်တယ်လို့ သြစတြေးလျလေ့လာမှု တစ်ခုအရ သိရပါတယ်။ အဲဒီစစ်ဆေးနည်းဟာ ကင်ဆာရောဂါမပြန့်နှံ့ခင် အစောဆုံးအဆင့်၊ လူနာတွေအသက်အန္တရာယ် မထိခိုက်ခင်အဆင့်မှာ တွေ့ရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ဆိုပါတယ်။ ဒီစစ်ဆေးနည်းအသစ်က သားဥအိမ်၊ အသည်း၊...
ရေရှည် ညဆိုင်းအလုပ်လုပ်သည့် အမျိုးသမီးများ ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားဟု ဆို
၊ ကိုထက် ၊ ရေရှည် ညဆိုင်းအလုပ်လုပ်ရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု၊ အထူးသဖြင့် ကင်ဆာစစ်ဆေးမှုကို ခံယူသင့်ကြောင်း လေ့လာသူတွေက သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ လေ့လာမှုအမျိုးမျိုးအရ အဆိုင်းခွဲပြီး အလုပ်လုပ်ရသူတွေ၊ အထူးသဖြင့် ညဆိုင်းအလုပ်လုပ်ရသူတွေက ကိုယ်တွင်းစနစ် ဟန်ချက်မညီမျှတာကို ဖြစ်စေပြီး ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကို ဦးတည်နေတယ်လို့...
နှာခေါင်းနားရှိ လေပြွန်အကျိတ်ကင်ဆာ ကုသအောင်မြင်ထားသူ ဒေါ်ဝင်းမော်သန်း
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၂၀၁၄ ဧပြီ ၂၀ ရက်နေ့တွင် အသက် ၅၀ အရွယ် ဒေါ်ဝင်းမော်သန်း၏ နှာခေါင်းထဲမှ သွေးခဲများ ထွက်လာခဲ့သည်။ နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း အထူးကုဆရာဝန်တစ်ဦးထံသွားပြခဲ့ရာ ထိပ်ကပ်နာဟုယူဆပြီး ဆေးဝါးများပေးခဲ့သည်။ “သုံးရက်လောက်နေတော့...
မိသားစုဆွေမျိုးတွေရဲ့ အားပေးမှုနဲ့ ကင်ဆာကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်တိုးတိုးမာ
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အသက် ၄၆ နှစ်အရွယ် ဒေါ်တိုးတိုးမာသည် သတင်းစာဖတ်ရင်း ကင်ဆာလက္ခဏာများအကြောင်း တွေ့လိုက်ရာမှ မိမိရင်သားကို စမ်းကြည့်မိကာ ညာဘက်ရင်သား၌ အကျိတ်များရှိသည်ကို စတင်သတိပြုမိခဲ့သည်။ “သတင်းစာဖတ်လိုက်တော့ ကင်ဆာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လက္ခဏာလေးတွေအကြောင်း...
ကင်ဆာပျောက်ကင်းပြီးသူထံမှ ဆဲလ်ကိုယူကာ ကုသမှုပေးမည့် ကင်ဆာကုသနည်းလေ့လာ
၊ ကိုထက် ၊ ကင်ဆာကုသပျောက်ကင်းသူတွေထံမှ ကင်ဆာဆဲလ် တွန်းလှန်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဆဲလ်တွေကိုယူပြီး တခြားကင်ဆာဖြစ်သူတွေကို ပြန်လည်ကုသပေးနိုင်မယ့် ကုသနည်းသစ်တစ်မျိုးကို ပညာရှင်တွေ လေ့လာနေကြပါတယ်။ ကင်ဆာကို တွန်းလှန်နိုင်တဲ့ ဆဲလ်အနည်းငယ်ကိုယူကာ ဆဲလ်ပေါင်းများစွာ ပြန်လည်ဖန်တီးပြီးနောက် ကင်ဆာဆဲလ်သစ်တွေကို ဖယ်ရှားပေးမယ့် နည်းပညာကို လေ့လာနေတာဖြစ်ပြီး နောက်တစ်နှစ်ခန့်မှာ...
ဆီးကျိတ်ရောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သိသင့်သမျှ
၊ ကိုထက် ၊ ဆီးကျိတ်ဆိုတာ သစ်ကြားသီးအရွယ် ဂလင်းငယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆီးကျိတ်ရည်တွေ ထွက်ရှိပါတယ်။ အမျိုးသား ၁၀-၁၂ ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ဟာ ဆီးကျိတ်ရောင်ရမ်းတဲ့ ဝေဒနာလက္ခဏာတွေကို ခံစားရတတ်တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဆိုပါတယ်။ ဆီးကျိတ်ရောင်ရမ်းတာက အသက် ၅၀ အောက်အမျိုးသားတွေမှာ အဖြစ်များဆုံး ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုလည်း...
ပါမောက္ခဦးအေးမွန် (ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)ဖြေကြားပေးပါသည်။ မေး. အန်တဲ့အခါ သွေးပါရင် ဘယ်လိုရောဂါဝေဒနာတွေကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါသလဲဆရာ။ မလေးသူ၊ ကျောက်မြောင်း။ ဖြေ. အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်းအပေါ်ပိုင်းသွေးယိုစိမ့်တာကြောင့် သွေး အန်နိုင်ပါတယ်။ အစာအိမ်ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ အူကြောင့်လည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သွေးအန်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းက အများကြီးရှိပါတယ်။ အဖြစ်အများဆုံးကတော့...
အသည်းကင်ဆာဖြစ်မှာစိုးတယ် . . .
မေး. ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အသည်းကင်ဆာဖြစ်တယ်ကြားလို့ ကြောက်နေပါတယ်ဆရာ။ မဖြစ်အောင် ဘာတွေဆင်ခြင်သင့်ပါသလဲ။ ဦးထွေးမောင်၊ ကျောက်မြောင်း။ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. အသည်းကင်ဆာက အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး၊ စီပိုးရှိပြီး ကုသမှု မခံယူဘဲနေတာနဲ့ အရက် အလွန်အကျွံသောက်တာတွေကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်...